8 mitambo yemahara uye kunyorera kwenguva yakati wandei (Zvita 30) | IPhone nhau
Isu tave kuda kupera 2016 asi izvo zvinopihwa uye zvinoderedzwa muApp Store hazvimire. Nhasi ndinokuunzira sarudzo nyowani ye yemahara mitambo uye maapp izvo zvinowanzobhadharwa.
Usakanganwa kuti izvi zvinopihwa ndezvenguva pfupi, kwenguva shoma, uye hatizive kuti mugadziri wepurogiramu yega yega anovaisa riini pamutengo wavo wenguva dzose. Tinogona chete kuvimbisa kuti ivo vari kutengeswa izvozvi, panguva yekutsikisa ichi posvo., saka usanyanya kufunga nezvazvo kana kuti unganonoka.
1 Bubble Shongwe!
2 PhotoJus Cute Fog FX Pro - Pic Mhedzisiro ye Instagram
3 Coloring Book - Dhirowa yeVana
4 Fotocam Chiedza Pro - Mufananidzo Mhedzisiro ye Instagram
5 Mhuka Kutanga Giredhi Math Mitambo yeVana vane Unyanzvi
7 Studio Music Player | Ridza mimhanzi muZere HD
8 Mwaka weMuti
Bubble shongwe Ndicho mutambo sezviri nyore kutamba sezvo zvakaoma kuwana, uye zvakanyanya muropa. Iwe unofanirwa kumhara bhokisi diki iwe raunoona kumusoro papuratifomu yegirini. "Izvi zvinoda kufungisisa uye nekukurumidza kufunga kuti ubudise mabhuru panguva yakakodzera."
Bubble shongwe Iyo ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva yakati wandei muApp Store.
PhotoJus Cute Fog FX Pro - Pic Mhedzisiro ye Instagram
Neichi chishandiso iwe unozogona kuisa yekutanga fog mhedzisiro kune ako mapikicha. «PhotoJus Cute Fog FX inoshandura pikicha yako […] ichiwedzera girazi bvungapfunga kumufananidzo wako! Zvese mhedzisiro zvakave zvakabatana zvakagadzirwa nehunyanzvi vatori vemifananidzo uye maartist kukupa iwe unoshamisa kwazvo maitiro mumufananidzo.
MufananidzoJus Cute Fog FX Iyo ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva yakati wandei muApp Store.
Coloring Book - Dhirowa yeVana
Mune ino kesi isu tinowana chishandiso muchikamu chedzidzo chakanyatsogadzirirwa chidiki cheimba uye pamwe futi kune avo vasina kunyanya kuderera. Iri ibhuku kupenda mifananidzo iyo yakatoverengerwa kana iya inogadzirwa nemwana ari ega.
Coloring Book - Dhirowa yeVana Iyo ine mutengo wenguva dzose we9,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva yakati wandei muApp Store.
Fotocam Chiedza Pro - Mufananidzo Mhedzisiro ye Instagram
Uyu mufananidzo wekubata zvakare pikicha nawo unogona kuwedzera "mwenje ine mavara mumifananidzo yako".
Chinja yako pikicha izvozvi kuita akasiyana akanaka mhedzisiro nekuwedzera mwenje wakanaka! Zvese mhedzisiro zvakabatanidzwa zvakagadzirwa nehunyanzvi vatori vemifananidzo uye vechokwadi maartist kuti vape chinoshamisa kwazvo mhedzisiro kumufananidzo.
Fotocam Chiedza Pro Iyo ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva yakati wandei muApp Store.
Mhuka Kutanga Giredhi Math Mitambo yeVana vane Unyanzvi
Kunyangwe mugadziri wemutambo uyu aigona kunge akaedza zvishoma kushandura musoro waro, chokwadi ndechekuti chishandiso chikuru chinosanganisira anopfuura zana zana emitambo yediki diki yeimba kudzidza hwaro hwemasvomhu.
Uyu mutambo, uyo wenyaya wandinoramba kudzokorora haha, une mutengo wenguva dzose we3,99 euros asi ikozvino unogona kuuwana mahara kwenguva pfupi muApp Store.
Mhuka Yekutanga Giredhi Math Mitambo6,99 €
En HappyTruck zvese zvaunofanirwa kuita ndeizvi senga michero kumusika nerori rako. Zvinonzwika zviri nyore? Zvakanaka, hazvina kudaro nekuti zvidimbu zvemichero zvinowira nyore uye unofanirwa kutakura zvakanyanya, zvirinani, kuti uwane mamaki ari nani.
HappyTruck Iyo ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva yakati wandei muApp Store.
Studio Music Player | Ridza mimhanzi muZere HD
Uye isu tinosiya mitambo kuti tienderere kune ino "single player" yatinogona kuteerera kumimhanzi yedu yatinofarira nehunyanzvi odhiyo yemhando yepamusoro, kana zvirinani ndizvo zvinovimbiswa nemugadziri wayo. Chero zvazvingaitika, sezvo iri yemahara, isu tiri kuzoyedza, handiti?
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Studio Music Player Iyo ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva yakati wandei muApp Store.
Studio Music Player | 48 mabhendi akaenzana ezve pro'svakasununguka
Uye isu tinopedzisa nemumwe mutambo wevana, vari pazororo uye vanofanirwa kuvaraidzwa. Mwaka weMuti «Tora vana vako mu yemashiripiti uye isingakanganwike rwendo kuenda kusango rizere nemavara, zvisikwa zvekuda kuziva uye zvinonakidza zvinonetsa. Vana vako vachapfuura nesango rine mhute, uye vachanzvera masango kunge nungo dzine husi.
Simudza ruzivo rwevana rwemasango emasango uye zvakasikwa macircuit
Inokurudzira kufunga uye kufunga zvine musoro, kusanganisira kufungidzira kweshanduko
Natsiridza kuziva nhamba
Inotsigira kuvandudzwa kweakanaka mota hunyanzvi
Mukuenderana neMult-Sensory Dzidzo
Inopa kukurudzira kwakaringana
Mitatu mitambo inonakidza uye inokurudzira
Ichokwadi, inokonzeresa mhedzisiro, magiraidhi uye mifananidzo inoitirwa vana
Mwaka weMuti Iyo ine mutengo wenguva dzose we1,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva yakati wandei muApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 8 yemahara mitambo uye maapplication kwenguva shoma (Zvita 30)
Samsung inogona kunge iri yepamutemo mutengesi weiyo 5,8-inch skrini eiyo itsva iPhone modhi
Jack Dorsey, CEO we Twitter: "Unofanirwa kukwanisa kugadzirisa ma tweets ako"